के म A ** प्वाल छ? | Martech Zone
के म A ** प्वाल छ?
बिहीबार, नोभेम्बर ०,, २०२० शुक्रबार, अप्रिल 23, 2021 Douglas Karr
के म एक ** प्वाल हो?
मेरो ब्लग को पाठकहरु सामान्यतया मेरो लागी समाहित हुन्छन् र आदर, उत्कटता र सहानुभूति को कुरा गर्न को लागी म मेरो ब्लग को माध्यम बाट प्रदान गर्न कोशिस गर्दछु। यो पक्कै पनि एक व्यक्तित्व हो जुन मैले प्रोजेक्ट गर्दछ र एउटा जुन प्रत्येक दिन कार्य गर्नको लागि म प्रयास गर्छु। ब्लग पोष्टसँग पूर्व योजनाको फाइदा हुन्छ (यद्यपि विगतमा म भएँ धेरै कुटिल), तर वास्तविक जीवन त्यस तरीकाले पर्याप्त रूपमा काम गर्दैन।
मसँग जानकारीको लागि सँधै भोक लाग्दछ। म आफैं रिसाउँछु जब अरु कसैले नयाँ टेक्नोलोजी ल्याउँदछ जुन मलाई केहि थाहा छैन। कामको एक दिन पछि, म आफैंलाई इन्टरनेटमा दफन गर्छु ग्रह र केहि पनि र सबै चीजको अन्वेषण गर्दै। I चाहनुहुन्छ यो सबै थाहा पाउनु I चाहनुहुन्छ सबैमा एक राय राख्न (र म सामान्यतया गर्छु)।
मेरो सहकर्मीहरूको साथ, यद्यपि, मँ कडा मेहनत गर्छु कि मेरा जिम्मेवारीहरूको सीमा कहाँ सुरु हुन्छ र अन्त हुन्छ। हाम्रो कम्पनीको केहि महत्वपूर्ण रणनीतिहरू मार्गनिर्देशन गर्दै, म प्रत्येक बैठकमा हुने र मेरो कुराकानीमा मेरो दुई सेन्ट फ्याँक्न सक्दिन। हामीले कर्मचारीहरू भाडामा लिएका छौ अझ बढी सक्षम र उनीहरूको शिल्पको जानकार म कहिल्यै हुने छैन। भावुक भए पनि, मैले आफूलाई अलग गर्नुपर्दछ र मैले ध्यान दिन सक्ने क्षेत्रहरूमा ध्यान दिन जरुरी छ र मैले प्रभाव पार्नु पर्छ।
यो हप्ता मैले माध्यम जोताएको छु The Asshole Rule: सभ्य कार्यस्थल निर्माण गर्ने र त्यो नभएको जीवित रहने by रबर्ट सटन। पढेकोले होईन सूटमा सर्पहरू: जब साइकोपाथहरू काममा जान्छन्, म त कार्यस्थलको व्यवहार र मनोविज्ञान मा एक पुस्तक गर्न riveted गरिएको छ।
वर्षौंसम्म, मैले मानेको छु (एक जनाले मलाई दिदैन) कुनै संस्थाको सफलता वा असफलताको तनाव। मैले मेरो धेरै सहकर्मीहरूलाई जागिरको तनावले जीवित खाएको देखेको थिएँ र म आफैंले पनि ठूलो अवरोध भोग्नु परेको छ।
सायद म मेरो पछि पछाडि २ दशक कार्यस्थल नाटकको साथ हेरिरहेको छु, तर तथ्य यो हो कि म अहिले जुन काम गर्छु म अहिले पनि त्यस्तै उत्साहित छु जस्तो कि म एक दशक पहिले भएको थियो। म मेरो जोस माफ गर्दिन, न त म यो कहिले पनि लुक्छु। जे होस्, म भावनात्मक रुपमा मुद्दाहरु र जिम्मेवारीहरु संग संलग्न भएको छु कि सहकर्मीहरु को परिभाषा र कार्यान्वयन गर्न जाँदैछन्।
परिणाम सफलता हो! म अहिले मेरो th औं क्वार्टर गोलहरू पार गरिरहेछु, मेरो कम्पनीमा ठूलो प्रभाव पार्दै, र पूर्ण रूपमा देखाइएको छैन ** प्वाल जस्तो म विगतमा भएको छु। म मान्छेलाई मेरो वरिपरि निर्णय लिन विश्वास गर्दै छु, जब म सहमत हुँदिन। मैले कहिले पनि व्यवसाय वा ग्राहकलाई जोखिममा राख्ने थिइनँ, तर म पनि मान्छेहरू उनीहरूको काँधमा हेर्नुहोस् वा मेरो राय के हुन सक्छ भनेर चिन्ता नगरोस् भन्ने चाहान्छु।
भावनात्मक हिसाबले मेरो होइन भन्ने निर्णयहरूबाट अलग्गै रहनु, यसले मलाई जिम्मेवारीको क्षेत्रमा सुधार गर्ने बढी अवसर प्रदान गरिरहेको छ जुन म am नियन्त्रण गर्दै। त्यसैले यहाँ मेरो सल्लाह छ तपाईलाई भोलि काममा बढि सफल हुन:
कामको बारेमा चिन्ता गर्न रोक्नुहोस् जुन अरू कसैले गर्नु जिम्मेवार छ।
सोधिएको बेला तपाईंको राय प्रस्ताव गर्नुहोस्, अन्यथा यसलाई आफैंमा राख्नुहोस् (जबसम्म यसले कम्पनी वा ग्राहकहरूलाई जोखिममा राख्दैन)।
निर्णयहरू र प्रक्रियाहरूबाट तपाईको स्वामित्व नहुँदा कसरी भावनात्मक रूपमा छुट्याउने भनेर सिक्नुहोस्।
काममा ध्यान दिनुहोस् गर्न सक्छन् संग फरक पार्नुहोस्।
तपाईं धेरै खुशी हुनुहुनेछ, तपाईंको रोजगारदाताले चाँडो प्रगति गर्नेछ, र मानिसहरूले तपाईंलाई एक ** प्वालको रूपमा बोलाउँदैनन्।
अमेजनमा नो गधा नियम अर्डर गर्नुहोस्
टैग: गधामार्केटिंग पुस्तकहरुगधा नियम छैनरोबर्ट सट्टन
नोभेम्बर २०, २००। 20::2008 अपराह्न
मैले महसुस गरेन कि यो एक पूर्ण विकसित ब्लग पोष्ट हुनेछ। मैले पाठक पोल जस्तो केहि चीजको आशा गरिरहेको थिएँ र म द्रुत हो वा कुनै बटन बन्द गरेर अगाडि बढ्नेछु।
भर्खर ठट्टा गर्दै राम्रो पोस्ट। मलाई केहि चीजहरू छोड्नु वास्तवमै गाह्रो छ, तर तपाईं जस्तो मलाई लाग्छ कि म दिनदिनै यो कसरी गर्ने भनेर सिक्दै छु।
मैले त्यो पुस्तक तपाईंबाट लिएको हुन सक्छ, तर त्यो किताब नम्बर be हुनेछ जुन म पढिरहेको छु।
त्यसो भए तपाईको चुनाव नतिजा के हुन्छ? 😉
नोभेम्बर,, २०१ at 21::2008 बिहान
राम्रो पोस्ट। यो एक विशेष सम्झौताको रूपमा विशेष गरी समयको रूपमा सबै कुराको नियन्त्रणमा छैन, जे भए पनि कम्पनीको आकार किन नहोस् र कसरी ठूलो अहंकार।
म केवल आशा गर्दछु कि तपाईं बीन कपमा अन्तिम कप क्याक खानेको लागि एक ** प्वाल हुनुहुन्छ! ठट्टा गर्दै, तपाईं र म दुबैलाई थाहा छ त्यहाँ छोडे पछि दर्जनौं अझै उपलब्ध थिए 🙂
हामी तपाईलाई केहि भन्न चाहन्नौं, तर। । । 🙂
मँ मेरो आगामीमा यो पोस्ट थप्न सक्छु पुस्तक समीक्षा ब्लग कार्निवाल?
नोभेम्बर २०, २००। 21::2008 अपराह्न
नमस्ते क्लार्क, तपाइँ बिल्कुल यसलाई थप्न सक्नुहुन्छ। सोध्नु भएकोमा धन्यवाद।
मैले काममा हालसालै यो याद गरेको छु। सहकर्मीहरू यति भावनात्मक तवरले आउँछन् कि तिनीहरूमा हेर्नुहोस् ती गलत निर्णयहरू हुन् जुन उनीहरू अन्ततः नियन्त्रण गर्न सक्दैनन्। यो खराब दृष्टिकोण, गरीब शरीर भाषा, बर्नआउटमा अनुवाद गर्दछ, र यसले उनीहरूको कार्यको गुणस्तरलाई असर गरिरहेको छ। अझ खराब, म निश्चित छु कि व्यवस्थापनले ध्यान लिएको छ।